Qoraalka iyo Xidhiidhka Qarsoon: Arimaha Gudaha iyo Caqliyada; Talooyin sahlan oo ku saabsan Khabiirka Cimilada, Natalia Khachaturyan
Marka la fulinayo SEO, waxaa jira khabiiro khiyaano ah oo khafiifin kara mashiinka raadinta algorithm ee darajada. Tusaale ahaan, qoraalka qarsoodiga ah iyo isku xirnaanta ayaa aasaas u ah qaar ka mid ah waxyaabaha suuq-geynta ah ee waxqabadka leh. Waxaa jira siyaabo badan oo lagu qarinayo qoraalka bogga shabakadda. Qaar ka mid ah xeeladahaan waxaa ka mid ah qoraalkaan waxaa ku jira Istaraatiijiga Miisaanka Naqshad , Natalia Khachaturyan:
Isticmaalka midabka qoraalka ah ee la mid ah midabada internetka,
Helitaanka qoraalka sawirrada ama fiidiyaha,
Dejinta cabbirada xarfaha ee aad u yar,
Isticmaalka CSS si aad u dhigto qoraalka shaashadda,
Qaadashada xayawaanka, sida, adigoo ku dhajinaya dabeecad
Xaaladahaas, farsamooyinka noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa inay ku lug yeeshaan waxyaabo badan oo ah qaab aan loo arki karin dadka booqanaya. Waxaa intaa dheer, iskuxirku wuxuu ku jiraa calaamadaha xayeysiiska sida jamacadu inta badan waa qarsoon tahay ama aan la arki karin.
Qaadashada waxyaabaha qarsoon
Maadada qarsoon waxaa badanaa la helaa siyaabo badan - centrum silver pharmaton. Dhamaan siyaabahan, qoraalka waxaa loo heli karaa mashiinka, laakiin aan la arki karin booqashada bini'aadamka. Fariin fudud oo fudfudud ah + A wuxuu ka caawiyaa in la muujiyo dhammaan waxyaabaha ku jira websiteka. Qaar ka mid ah koofiyadaha madow ee SEO ayaa laga yaabaa inay sidoo kale isticmaalaan midab la mid ah asalka ah ee asalka ah..Xaaladahan, waa inaad nuqul ka sameysataa bogga internetka oo dhan tifaftiraha kale ee qoraalka ah, adoo isticmaalaya ikhtiyaarka caleenta. Xeeladahani waxay kaa caawin kartaa in aad soo bandhigto dhamaan wixii qarsoodi ah ee bogga bogga. Xidhiidhada waxay ku imaan karaan meesha ay u muuqdaan inay yihiin kuwa ruqsadaha ku jira bogga oo dhan.
Sababaha loogu talagalay maadada qarsoon
Dadku waxay isticmaalaan waxyaabo qarsoon sababo kala duwan. Fikradda ugu caansan ee ka dhasha mawduucyada ku jira bogga internetka waa darajo. Dadku waxay ku dhuuntaan ereyada muhiimka ah ee qarsoodiga ah si ay u tijaabiyaan oo ay ugu saxeexaan algorithm iyagoo ku daraya mareegahaaga hore. Waxaa intaa dheer, walxaha muhiimka ah ee muhiimka ah waa habka madow ee madow SEO ah oo faa'iido u leh isticmaalka maadada qarsoon. Soo bandhigista ereyada muhiimka ah ee bogga shabakadda waxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaada qodobbada iyo khatarta websaydhka.
Sidee looga dhigaa mawduuca boggaaga?
Maadi qarsoodi ah waxay keeni kartaa ciqaabta website-ka Google SERPs. Xaaladahan, sheeko qarsoon waxay dadka ka caawisaa inay helaan digniino badan oo ku saabsan deenxation ee website-kooda. Waa lagama maarmaan in mawduucaaga la arki karo. Qaar ka mid ah siyaabaha aad u kordhin karto aragtidaada waxa ku jira:
Sawirada: Qoraalka sharaxaadda waxaa laga heli karaa sifo hoose. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in lagu daro qori-ka-bini-aadanaha iyo sidoo kale sharaxaadda qoraalka hoose ee sawir kasta.
Fiidiyeyaasha: Fiidiyooga ayaa sidoo kale soo koobaya nuxur kaas oo la heli karo si loo muujiyo. Waxaad ku qori kartaa fiidiyow ama xitaa ku dar qoraalo sharaxan fiidiyowyada HTML.
Waxaa jira siyaabo badan oo wax looga dhigi karo waxyaabo qarsoodi ah waxay waxyeelayn karaan dadaalkaaga SEO. Tusaale ahaan, hababka khadadka madow ee SEO ah ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan qoraalka qarsoodiga ah si ay u qariyaan ujeedooyinkooda muhiimka ah. Xaaladaha kale, dadku waxay isticmaali karaan sheeko qarsoodi ah waxayna dabooli karaan xiriiro badan oo ku xiran aaladaha kala duwan. Maqaalkani wuxuu kaa caawin karaa inaad ka hesho waxyaabaha la qariyay bogga internetka.